11/06/2018 - Page 3 sur 5 -
Fifandonana tany Tsiroanomandidy : Azon’ny zandary ny basy telo tany amin’ireo dahalo
Nihena indray ny fitaovam-piadiana eny am-pelatanan’ireo dahalo any amin’iny distrikan’i Tsiroanomandidy iny vokatry ny faharesen’ireto farany tao anaty fifandonana niseho tany an-toerana ny harivan’ny zoma lasa teo. Nogiazan’ireo zandary taorian’ny fifanandrinana nisy teo amin’ny roa …Tohiny
Jumbo Smart Tanjombato : Efa miverina amin’ny laoniny ny filaminana
Taorian’ny savorovoro nisy teny amin’ny Jumbo Smart Tanjombato mahakasika ilay raharaha fisiana baomba, dia efa miverina amin’ny laoniny ny filaminana sy ny toe-draharaha eny an-toerana amin’izao fotoana izao. Efa niverina nanohy ny asany avokoa ireo …Tohiny
Trafikana “héroïne” : Tsy voalaza ny fisiana kalaky roa sy vola tamin’ny sakaosy
Tsy voaresaka nandritra ny valandresaka natao tamin’ny mpanao gazety teny Antaninarenina ny zoma lasa teo ny fisiana basy kalaky roa tratra niaraka tamin’ireo zava-mahadomelina mahery vaika milanja 140 kilao teny Manjakandriana. Raha ny heno ihany …Tohiny
Fanafihana mitam-basy : Zaza iray voatifitra teo amin’ny feny
Mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana. Lasa fitaovam-pitaterana entin’ny jiolahy hanaovana asa ratsy indray ny Bajaj any amin’ny kaomina Mahajanga. Tokantrano iray araka izany no fantatra fa notafihina jiolahy mirongo fitaovam-piadiana toa ny basy, tany amin’ny …Tohiny